Thursday June 27, 2019 - 21:49:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Qaadiga ayaa ka hor xukunka fagaaraha ka sheegay in uu maxkamadda usoo dacwooday Xassan Khaliif Aadan oo adeer u ah Caddeey isagoo Abshir ku eedeeyay inuu gabadhooda guursaday hal da’na uu ka dhalay xilli uu horey hooyadeed u qabay.
Dacwaddiisa wuxuu ku sheegay in Abshir uu gabadha la dhuuntay islamarkaana uu meel baadiyo ah kusoo nikaaxsaday wali la’aan iyadoo ah.
Maxkamadda ayaa jawaab ka dalabtay Abshir, balse wuu iska dafiray arrintan, oo kaliya wuxuu sheegay inuu gabadha guursaday laakin aanu guursan hooyadeed.
Intaa kadib waxaa ku marqaati furay dad degaan ah oo la socday qadiyaddan waxayna Abshir ku eedeeyay inuu guursaday gaabr rabiibadiisa ah, gabarna uu ka dhalay.
Qaadiga ayaa sheegay in marqaatigu uu ansaxay, sidaa darteed ayaana waxaa lagu xukumay inuu ficilkaasi ku dhacay isagoo waliba og. Waxa kale oo lagu xukumay dil toogasho ah iyadoo lasoo bandhigay adillooyin diinta islaamka ah oo caddeynaya xukunka.
Maxkamadaha wilaayaadka islaamiga ah ayaa maalin walba ah kuwa ku mashquulsan u kala gar qaadidda dadka isku heysta dhulalka, diyooyinka iyo xad gudubyada kale, iyadoo qof walba la mariyo waxa ay diinta islaamku ka qabto, waana midda keentay in ay bulshadu kusoo hirato.